Saurik Inotangisa Cydia Impactor Kubvisa Jailbreak | IPhone nhau
Saurik inotangisa Cydia Impactor kubvisa Jailbreak
Nhau dzakanaka dzevanhu munharaunda yeJailbreak. Saurik achangobva kuvhura chishandiso chinokutendera iwe kuti ubvise Jailbreak kubva ku iPhone kana iPad usinga gadzirise iyo system. Ichi chishandiso chaicho tweak inonzi "Cydia Impactor", iyo inotibvumidza kubvisa uye kudzoreredza shanduko dzese dzakaitwa kuchinhu chine Jailbreak kuti chidzorere kuchimisikidzo chayo chekutanga, senge pakudzosera mudziyo. Iyi tweak inobatsira zvinoshamisa kune avo vanodzokera mukusave nejerebreak nekuda kwechimwe chikonzero uye ichatiponesa kubva pakuita yekuvandudza.
Chinhu chinonyanya kufadza nezve iyi tweak, sezvatakambotaura, inyaya yekuti inotibvumira kuti tidzokere kuIOS yakachena pasina chikonzero chekuita gadziriso apo iOS inomira kusaina yazvino vhezheni pamwe nekugona kweJailbreak iyo iripo nguva iyoyo. NaCydia Impacter iwe unodzokera kune yekutanga mamiriro e iPhone yako pasina kuda kwechimwe chinhu, nyore, nekukurumidza uye zvakapusa nyore. Cydia Impactor yakafanana naIlex Rato kana SemiRestore, nerubatsiro rwekuti chishandiso ichi chakagadzirwa naSaurik pachake.
Cydia Impactor 0.9.15 parizvino iri mubeta yeIOS 8.3 uye iOS 8.4, saka usati washandisa iyi tweak tinokurudzira zvakasimba kuti uchengetedze chishandiso chako kuTunes kana iCloud kuti uve nechokwadi chekuti haurase ruzivo rwako rwese. Cydia Impactor ichabvisa rese data. Paunenge waurayiwa, iwe unozofanirwa kumisazve chishandiso uye nekuenderera kuburikidza neyekutanga setup maitiro sekunge iwe wainge wadzoreredza mudziyo. Saurik akataura zvakare kuti zvakakosha kuti usabate chishandiso apo Cydia Impactor iri kumhanya kudzivirira matambudziko, uye pamusoro pechose chishandiso chinofanirwa kuve chakabatana neinternet uye neinopfuura 50% bhatiri.
Nharaunda yeJailbreak inogamuchira chishandiso chakakosha ichi, uye inopupurira kuti Saurik achiri pamusoro pemutambo wake mukuvandudzwa kweshanduro idzi dzeJailbreak. Saka ikozvino unoziva, kana iwe uchida kudzorera yako iPhone kune yayo yepakutanga mamiriro nekuti Jailbreak haina kugadzikana, kana iwe wakangoti waneta neJailbreak, ino inguva yako, tora Cydia Impactor uye siya chako chishandiso chitsva.
Zita: Cydia Impactor
Kubatana: iOS 8.3+
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Saurik inotangisa Cydia Impactor kubvisa Jailbreak
Inoshanda kwete, zvinotevera!
Zvingave zvinonyanya kubatsira kana zvaienderana neshanduro dzekare dzeios, asi ini ndine ios 8.1, handina imwe sarudzo kunze kwekudzorera kubva kuTunes.Ndanga ndichitarisira kubvisa iyo jailbreak uye kugadzirisa kuburikidza neOTA!
Juan Ojeda akadaro
Ko cydia impactor ichasunungurwa yeIOS 8.1?
Pindura Juan Ojeda
Miguel urikutsanangura zvisizvo, kana akabvisa dhata rese, zvachose zvese, ndosaka achiti zvakafanana nesemoretore uye ilexrat, uye iwe waisa izvi: dzosera shanduko dzese dzakaitwa kuchinhu chine Jailbreak kuti chidzorere kumisikidzwa kwayo kwekutanga, pasina kurasikirwa zvachose nedhata. mundima yekutanga, chinja nekuti iwe unokanganisa vanhu ...
zvimwe mune iyo podrio tweak kana yaiswa inoita kuti zvinyatsojeka mutsvuku pazasi, bvisa rese data uye unjailbreak kifaa, chinja nekukurumidza sezvinobvira miguel !!!
Mhoroi, masikati akanaka Jesu. Ndizvozvo, ndinotaura pazasi mune chinyorwa chechinyorwa, asi ndakabatikana kunyora. Ndatenda katsamba uye ichagadziriswa izvozvi. Kwaziso nekutenda nekuverenga.
Wataura chokwadi asi panogara paine munhu asingakwanise kuverenga chinyorwa chose uye achifungidzira kuti anoverenga chete yekutanga kana yekutanga ndima mbiri ... anofunga kuti haasi kuzorasa mifananidzo nezvimwe uye wham, ndosaka zvakakosha kuti iwe uchinje icho nekukurumidza sezvazvinogona (ndinoramba ndichichiona, ndima 1 mutsara 4).
Zvakatora nguva yakareba kuratidza, asi zvatochinjwa. Kwaziso nekutenda Jesu.
Ndizvozvo, ndakavhiringidzika, ndikaverenga kuti hapana chakabviswa kubva kudata uye ini ndinosiya izvo zvinovhiringidza iye zvino mumashoko ndakangobvisa kusahadzika kwese.
George avram akadaro
Sei kubvisa jailbreak? Chii chaitika?
Pindura kuna George Avram
Vanhu havaverenge kusvika pekupedzisira asi mumitsara yekutanga iwe yaunoisa "zvinotibvumidza kudzima uye kudzosera shanduko dzese dzakaitwa kuchinhu chine Jailbreak kuti chidzorere kumagadzirirwo acho ekutanga, pasina kurasikirwa zvachose nechero data." Zvingave zvakanaka kana iwe ukabvisa izvo nekuti iwe unorasa iyo data uye zvinopesana nezvamunoisa kumagumo kwechinyorwa.
Kanganiso yatogadziriswa kare. Kutenda nekuverenga uye nezvezvakanakisa.
Zvino zvakakwana. Ndotenda zvikuru.
Usati wapa maonero ako, zviri nani verenga chinyorwa.
Kuverenga hakubhadhare uye hakukuvadze.
(Cydia Impactor ichabvisa data rese. Kana yangotangwa, iwe unozofanirwa kumisazve chishandiso uye nekuenderera kuburikidza neyekutanga setup maitiro sekunge iwe wadzoreredza chishandiso.)
Saka hazvina basa kudzoreredza kumafekitori marongero, haufunge? Zvirinani kuti zvakapusa ndakadzorera yangu iPad, kubvisa iyo jailbreak pasina dambudziko.
Victor Red akadaro
Fucking, yakanaka chishandiso
Pindura Victor Rojo
Kumwe kusahadzika, ini ndiri paIOS 8.3 asi ndine husimbe kwazvo kuidzosera kubva kuTunes uye kuigadziridza kusvika 8.4, kana ndikaidzosera nechishandiso ichi ndinogona here kugadzirisa kuburikidza neOTA? Ndine iPad Air 1G
Valdo_punk. Izvi zvakanaka kana iyo vhezheni iyo Apple inomanikidza kuisa kana ichidzosera isina jailbreak uye iwe uchida kuve neJAILBREAK yakachena zvekare.
Iye zvino ndinobvunza Miguel herandez. Iwe hautaure chero chinhu pamusoro pekuti inogona kuvharwa zvakare .. Ndinovimba unopindura uye ndinotenda ruzivo rwuri mune iyi tweak.
Miguel Hernandez. Ndine mumwe mubvunzo. Unoziva here kuti ungagadzirisa sei iko kukanganisa kunopihwa neApple 8.3 kana uchirodha pasi app nyowani muAppStore? Ini ndinodarika i5s kune yakachengeteka modhi ..
Ndatenda; Ini ndaireva kuti kudzoreredza nekupinda masetingi, zvakajairika, kugadzirisa patsva, kudzima zvemukati nekumisikidza zvinosiya chishandiso mushanduro imwechete sezvauri, kureva kuti, hausi kurodha vhezheni yacho, zvinongobvisa kuparara kwejeri. Izvo zvakasiyana kana iwe uchidzorera kubva iTunes, nekuti ipapo zvinokumanikidza iwe kukwidziridza.
Pindura kune valdo_punk@hotmail.com
Esteban iphone akadaro
valdo_punk, kana uine jailbreak uye ukaisa kudzoreredza kubva pachigadzirwa, haina kuenda kupfuura block, inoramba iri muchiuno, unogona kuitarisa dai yaive yakapusa, iyi tweak ingadai isingabatsiri dai vaigadzira
Pindura Esteban iphone
e zvekare JAILBREAK yakachena ..
Iye zvino ndinobvunza Miguel herandez. Hautaure chero chinhu pamusoro pekuti inogona kuvhunika zvakare .. ndinovimba uchapindura uye ndokutenda valdo_punk, kana iwe uine jailbreak uye ukaisa kudzorera kubva kuchigadzirwa, hazviitike kubva paapuro iyo inoramba iri mune chiuno, unogona zviongorore
Miguel Hernandez. Ndine mumwe mubvunzo
jailbreak it zvakare .. Ndinovimba unopindura uye ndokutenda valdo_punk, kana uine jailbreak uye ukaisa kudzorera kubva pachigadzirwa, hazviitike kubva paapuro iyo inogara iri muchiuno, unogona kuitarisa
Iye zvino ndinobvunza Miguel herandez. Hautauri chero chinhu pamusoro pekuti inogona kuvhunika zvakare mujeri .. Maita basa; Ini ndaireva kuti kudzoreredza nekupinda masetingi, zvakajairika, kugadzirisa patsva, kudzima zvemukati nekumisikidza zvinosiya mudziyo mune imwecheteyo se
Pindura ku cleardrain
Pindura kuna kamson
Izvi zvakanaka kana iyo vhezheni iyo Apple inomanikidza kuisa kana ichidzosera isina jailbreak uye iwe uchida kuve neJAILBREAK yakachena zvekare.
Ini ndaireva kuti kudzoreredza nekupinda masetingi, zvakajairika, kugadzirisa patsva, kudzima zvemukati nekumisikidza zvinosiya mudziyo mune imwecheteyo se
Pindura kuna mwcc
Ndakadaro, asi hutachiona hunouya ...
Pindura kuna mwccc
ndinoifarira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Pindura ku https://www.hkta.edu.hk/
Chenjera chitsotsi chinoonekwa muSafari